တရုတ်နိုင်ငံက ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် 5G အခြေစိုက်စခန်း ၆၀၀,၀၀၀ ထပ်မံတည်ဆောက်မည် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် 5G အခြေစိုက်စခန်း ၆၀၀,၀၀၀ ထပ်မံတည်ဆောက်မည်
ပေကျင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် – ခေါန်ရိန်
တရုတ်နိုင်ငံက လာမည့်နှစ်တွင် 5G အခြေစိုက်စခန်း ၆၀၀,၀၀၀ ကျော် တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Xiao Yaqing က ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌ ပြောခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် 5G ကွန်ရက် တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းများကို မြှင့်တင်သွားမည် ဖြစ်ပြီး အဓိကမြို့ကြီးများတွင် 5G လွှမ်းခြုံမှု အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့် ပူးတွဲတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်းများ အဆင့်မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ထပ်မံ၍အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုများအနေဖြင့် ကွန်ရက် အသုံးပြုရလွယ်ကူရေးနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး၊ ကွန်ရက်သုံးစွဲသူ gigabit အရေအတွက်ကို သန်း ၂၀၀ ကျော်အထိ တိုးမြှင့်ရေးနှင့် app များမှ အသုံးပြုသူများ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် အကျိုးစီးပွားများ ချိုးဖောက်မှုအပေါ် ဖော်ထုတ်ရေး စသည်တို့ ကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Dec. 29 (Xinhua) — China will build more than 600,000 5G base stations next year, said Xiao Yaqing, minister of industry and information technology ataworking conference on Monday.
More efforts will be made to optimize and upgrade the network, increase the number of gigabit network users to more than 200 million, and crack down on infringements of users’ rights and interests by apps. ■
တရုတ်နိုင်ငံ၏ C919 ဂျက်လေယာဉ် အေးသောရာသီဥတုတွင် စမ်းသပ်ပျံသန်းမှု အတွင်းမွန်ဂိုးလီးယားဒေသ၌ စတင်